Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): ကောင်းကင် နဂါး- မြန်မာ့ ရိုးရာ။
လူတို့သည်- သတ္တ၀ါတို့ အားလုံး အနက်တွင်- Society ခေါ် နေထိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြင့်- ဆက်သွယ်မှု Communication အကောင်းဆုံး- သတင်း အချက်အလက် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မှု အကောင်းဆုံးသော သော သတ္တ၀ါ ဟု ဆိုလျှင် မှားအံ့ မထင်။
တစ်ဘက်တွင်လည်း- ကျွန်တော်တို့ လူသားများ သည် ကျွန်တော်တို့ သိရှိသော အသိဥာဏ်၊ ဗဟုသုတ တို့ကိုသာ မက- ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် ကောင်းစွာ မသိရှိ၊ နားမလည်သော ဝေါဟာရ စကားလုံးများကိုပါ- ရှေးရိုး အစဉ် အလာ အရ- လက်ဆင့်ကမ်း လာမိခဲ့ကြသည်။
မူလ ပထမ က- ဆိုလိုခဲ့သော မူရင်း အဓိပ္ပါယ်၊ တကယ့် ဆိုလိုရင်းကို နားမလည်ပဲလျှက်- ကျွန်တော်တို့သည်- ထိုဝေါဟာရများကို တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲကြသည်။ သုံးစွဲလာကြယင်း- ထင်သလို နားလည်သလို အဆင့်ဆင့် အဓိပ္ပါယ်ကောက်လာကြယင်း ဖြင့်ပင်- မူလ အဓိပ္ပါယ် မှန် နှင့် ဝေးကွာ မှန်းမသိ ဝေးကွာ၊ သွေဖီမှန်း မသိ သွေဖီ လာတော့သည်။
ဥပမာ- မြင့်မိုရ်တောင် ဆိုလျှင်- မြန်မာအားလုံး ကြားဘူး၏။ သို့သော် ၄င်းသည် ဘာကို ဆိုလိုသလဲ ဆိုသည်ကိုမူ- ကျွန်တော်တို့ တကယ် မသိခဲ့ကြ။ ထိုနည်းတူ- နိဗ္ဗာန်၊ ငရဲ၊ စသည်တို့သည် နေ့စဉ်လိုလို သုံးစွဲနေကြသော ဝေါဟာရများ ဖြစ်သော်လည်း- ကျွန်တော်တို့ တကယ် သိသလား ဆိုလျှင် အဖြေက ရှင်း၏။ မသိ။ ထိုထို ဝေါဟာရများကို ပြောဆို သုံးစွဲ နေကြသူတို့- တစ်ပါးသူကို သင်ကြားပေးနေကြသူတို့ သည်လည်း- ထိုနေရာများကို ရောက်ခဲ့၍ ပြန်လာပြီး ကိုယ်တိုင်သိကို ပြန်ပြောပြ နိုင်သူမရှိ။
ဒူးရင်းသီး မစားဘူး ပဲလျှက်- တကယ့် ဒူးရင်းသီး မည်သို့ အရသာ ရှိသည်ကို သိနိုင်ပါမည်လား။ တစ်စုံတစ်ယောက် အနေဖြင့်- အခြားသူတစ်ယောက် ပြောပြသော ဒူးရင်းသီး အရသာကို- မိမိနားလည် သွားသည်ကို အမှန်ထင်လျှက် လက်ဆင့်ကမ်း ဆက်ပြောပါက- မည်မျှ မှန်ကန် နိုင်ပါမည်နည်း။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိုသို့ အနေအထား မည်မျှ ရှိနေပါသနည်း။ ဥပမာ- မွေးရာပါ မျက်မမြင် တစ်ဦးအား- ဗျိုင်း ဆိုသည်မှာ အဖြူရောင် ပြောပြ- အဖြူရောင်သည် နွားနို့ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြရာမှ တစ်ဆင့်- မျက်မမြင် အနေဖြင့်- နားလည်သွားသည်မှာ ဗျိုင်းသည် နွားနို့ နှင့် တူသည် ဟူ၍ ဖြစ်လျှင်- အ၀ိဇ္ဇာ အမှောင်တို့ဖြင့်- ပိန်းပိတ် မှောင်ဖုံး နေသော ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် - တစ်ဆင့် ဆိုစကားများ အရ နားလည် ထားကြသည် များသည် လည်း အမှန် ဖြစ်နိုင်ပါမည်လား။ မှန်လျှင်သော်မှ မည်မျှ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ မှန်နိုင်ပါအံ့နည်း။
မြင့်မိုရ်တောင် နှင့် ပတ်သက်၍- “မြင့်မိုရ်တောင် ရှာပုံတော်”
ဆောင်းပါးကို ကျွန်တော် ရေးသားတင်ပြခဲ့၏။ သို့သော် လည်း- ကျွန်တော့် အမြင်၊ ကျွန်တော့် အယူအဆ၊ ကျွန်တော် နားလည် သည်သာ ဖြစ်၍- တကယ့် အမှန် ဟုတ်မဟုတ်ကိုမူ- ကျွန်တော် အသေအချာ မပြောနိုင်။
ဆိုလိုသည်မှာ- ကျွန်တော် တကယ်မသိ။
ကိုယ်ဘယ်ဘ၀က လာသည်ကို မသိ၊
ကိုယ်ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို သေမည် ဆိုတာကို မသိ၊ (အနာဂါမ် အဆင့်ကျော်လွန်မှသာ သိနိုင်သည်ဟု နားလည်ထားပါသည်။)
ကျွန်တော်တို့ သေလျှင် မည်သည့် ဘ၀ သို့ ရောက်နိုင်မည်ကို မသိ၊ (အရိယာ မဖြစ်သေးသမျှ)
မိဘတို့ မှ မိမိကို မွေးဖွားသည်မှာ အသေအချာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း တိတိပပ မသိ။ (ဆရာတော် ဦးဗုဓ်ကဲ့သော ၀ိနည်း အလွန်သတိထားသူ ရဟန်းများ အနေဖြင့် မိခင် မှာမူ- မွေးဖွားကြောင်း- အသိသက်သေများ ရှိသဖြင့် မိခင် အဖြစ် လက်ခံနိုင်သော်လည်း- ဖခင် ဖြစ်သူအား မသေချာ ဟုပင် ဆိုခဲ့၏။)
မိမိမွေးဖွားသည့် နေ့ရက်၊ အချိန်တို့ကိုပင် မိဘတို့က ပြော၍ သိရ၏။ (သူတို့ မှတ်သားခြင်း မရှိပါက- ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်)
တကယ် စဉ်းစားကြည့်သော အခါ- အခြားကိစ္စများ အသာထား- မိမိကိုယ်တိုင် နှင့် ပတ်သက်သော အလွန် အရေးကြီးသည့် အရာများကိုပင်- ကျွန်တော်တို့ သေသေချာချာ မသိ။
သေသေချာချာ မသိ၍- ထိုအချင်းအရာ၊ ထိုဖြစ်ရပ် တို့သည် မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုပြီး လက်မခံပဲ နေ၍ရော- ရနိုင်ပါမည်လား။
သို့သော် ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ခံ သုံးစွဲ ရပြီဆိုလျှင်တော့- အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိ သိနားလည်အောင် ကြိုးစား အားထုတ်သင့်သည် ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည် မိ၏။
အကယ်၍- မိမိယုံကြည် ကိုးကွယ်သော ဘာသာရေး နှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆ- ယုံကြည်မှု သတ်မှတ် ချက်များကို မိမိကိုယ်တိုင် မသိပဲ- (သိအောင်လည်း မကြိုးစားပဲ) နေခဲ့ မည် ဆိုပါက- တစ်ချိန်က “ကျောက်ကွင်း အရေးတော်ပုံ” ကဲ့သို့သော ယှဉ်ပြိုင် မှုမျိုး ပေါ်ခဲ့သော်- တစ်ပါးသူက - မဟာ ဗုဒ္ဓ၀င်ပါ အားနည်းချက်၊ စိဉ္ဇမာန မှ ဘုရားရှင်အား စွပ်စွဲချိန်တွင် သိကြားမင်း ကြွက်ယောင်ဆောင် ထမီအောက် ၀င်သည် ဆိုသော အချက် စသည် များဖြင့် ထိုးနှက်ခြင်း ခံရပါက- လည်စဉ်း ခံရရုံ၊ မျက်စိပျက်၊ မျက်နှာပျက် ဖြစ်ရုံ၊ မကျေမနပ် ဒေါသ ထွက်ရရုံ မျှ အပ အခြားမရှိ။
ပို၍ ဆိုးသည်က- အချို့သည် မိမိ မသိသည် ကိုပင်- တကယ်မသိမှန်း မသိ၊ မိမိ သိရှိသည်မှာ အပေါ်ယံ သဘောမျှ (အရပ်သိ၊ ဇတ်သိမျှ သာ) ဖြစ် သော်လည်း)- အမှန်ပင် သိရှိ နားလည် သကဲ့သို့ မှတ်ထင်လျှက်- တစ်ပါးသူ၏ လက်ခံ နားလည် ယုံကြည်မှု တို့ကို တိုက်ခိုက် ထိုးနှက် တတ်ကြခြင်း ဖြစ်တော့၏။
မသိခြင်း သက်သက် သည်- အသိဥာဏ် နှင့် လေ့လာအားထုတ်မှု အားနည်းခြင်း မျှသာ ဖြစ်၍- မသိပဲလျှက် ရှေးပညာပါ အချက်များ၊ တစ်ပါးသူ၏ ယုံကြည် လက်ခံမှုများကို ထိုးနှက်ခြင်းသည်ကား- စိတ်ဓါတ်ပိုင်း အားနည်းခြင်း တို့ပင် ဖြစ်တော့၏။
လူကြီးလူကောင်း- စိတ်ဓါတ် ပညာ ပြည့်ဝသူတို့သည်- မိမိကိုယ်တိုင် တစ္ဆေသူရဲ မယုံသည် ဖြစ်စေ- သူရဲ ကြောက်တတ်သူ အား- နှိမ်ချ၊ စော်ကား တိုက်ခိုက်ခြင်း ပြုမည် မဟုတ်။ ကူညီခြင်း- အားပေးခြင်း သာလုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်၍- ကဲ့ရဲ့ခြင်းကား လုပ်မည် မဟုတ်။
လက်တွေ့ဘ၀တွင် ထိုသို့သော အနေအထားများစွာ ရှိနေလေတော့၏။
နဂါးလှည့် နှင့် ပတ်သက်၍-
“တ၊တန်၊က- နောက်န၊၀ါ၊၀ါ- မြောက်၊တော်၊ကျွတ်၊မုန်း- ရှေ့၊နတ်၊ပြာ၊တွဲ- တောင်၊လူတို့ဘောင်ရှောင်ရန် နဂါးလှည့်”
ဆိုသည် ကို မြန်မာ လူမျိုး တိုင်းလိုလို အနည်းနှင့် အများ ကြားဘူးကြ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ-
တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် တို့တွင် နဂါးခေါင်းသည် အနောက်ဘက်-
နယုန်၊ ၀ါဆို၊ ၀ါခေါင်တို့ တွင် နဂါးခေါင်းသည် မြောက်ဘက်-
တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်းမုန်းတို့တွင်- အရှေ့ဘက်-
နတ္တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲတို့တွင် - တောင်ဘက် သို့ လှည့်သည်ဟု
ဆိုယင်း ဖြစ်၍- နဂါး လှည့်နှင့် အဆန်သော် လည်းကောင်း၊ အစုန်သော် လည်းကောင်း မသွားသင့်-ပဲ နဂါးကို ကန့်လန့် ဖြတ်-အနေအထား အတိုင်းသား သာ ခရီးသွားလာခြင်း မျိုး လုပ်သင့်သည် ဟု ဆိုလိုခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်၏။
အမှန်အားဖြင့် ဆိုသော်- နဂါးလှည့်သည် ခရီးသွားခြင်း အရပ်မျက်နှာကို ရွေးချယ်ရန်သာမက- အိမ်ဆောက်ခြင်း၊ ပန္နက် ရိုက်ခြင်း၊ လယ်ယာ မြေ စတင် ထွန်ယက်ခြင်း၊ လက်ဝှေ့ ကိုယ်ခံများ လေ့ကျင့်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ရာတွင် လည်းကောင်း- အရပ်မျက်နှာ ရွေးချယ် ရခြင်းများ အထိပင် ပါဝင်၏။
ထိုနဂါးလှည့် သည် ဘာကို ဆိုလိုသနည်း။
ထိုနဂါးလှည့် နှင့် မကိုက်ညီလျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်း။
ဘာကြောင့် လက်ဆင့်ကမ်း သင်ကြားခဲ့သနည်း၊
ထိုနဂါးလှည့်ကို လိုက်နာသူတို့ လည်းရှိ၏။
ထိုနဂါးလှည့်ကို မလိုက်နာသူတို့ လည်းရှိ၏။
ထိုနဂါးလှည့်ကို လိုက်နာသူတို့ အားလည်း ဝေဘန်ရှုံ့ချသူတို့ ရှိ၏။
ထိုနဂါးလှည့်သည် ဘာဆိုလိုမှန်း မသိပဲ နှင့်- “လုံးဝ အဓိပ္ပါယ်မရှိ” ဟူသော စကားဖြင့်- တစ်ချက်တည်း အပိုင်အနိုင် ဝေဘန် စော်ကားသူများလည်း ရှိ၏။
ထိုထိုသူ များတွင်- မိမိကိုယ်တိုင် သေချာစွာမသိသော ဟိန္ဒူ -ဗြဟ္မဏ ၀ါဒ ဆိုသည်ဖြင့်ပါ တွဲလျှက်- နဂါးလှည့်သည် ဗြဟ္မဏ ၀ါဒ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုကာ-၂-ခုစလုံး ရောယှက်ကာ- ဝေဘန် သူများလည်း ရှိ၏။
ဟိန္ဒူကျမ်းများစွာ တွင်- မြန်မာကျမ်းများ လောက် နဂါးလှည့်ကို ဦးစားပေး ဖေါ်ပြ ရေးသား သည်ကို ကျွန်တော် ယခု အချိန်အထိ မဖတ်ဘူး မကြုံဘူးသောကြောင့်- ထိုနဂါးလှည့်သည်- ဗြဟ္မဏ ၀ါဒ ဖြစ်သည် ဟု ကျွန်တော် မသိ၊ ဝေဘန် ပြောသူများက အနေဖြင့်- ကျွန်တော် မဖတ်ဘူးသော ကျမ်းတို့ကို ဖတ်ဘူးသဖြင့်သာ ဤသို့ ပြောနိုင်ခြင်း ဖြစ်မည် ဟု ယူဆမိ၏။
မြန်မာ့ နက္ခတ် ပညာသည် ဟိန္ဒူ နက္ခတ်ပညာကို အမှီပြုသော်လည်း- ဟိန္ဒူ နက္ခတ် ပညာနှင့် မြန်မာ့ နက္ခတ်ပိုင်း မတူညီ၊ ကွဲပြားသည်များ၊ ဦးစားပေး မတူညီသည်များ၊ ထပ်ဆင့် ပါရှိသည့် အချက်များ စသည် တို့ကို တော့- ကျွန်တော် အနည်းငယ်သိထား၏။
လွန်ခဲ့သော- အနှစ် ၃၀ ခန့်- ကျွန်တော် ငယ်ရွယ်စဉ်က- ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်၏ “မိုးပေါ်မှ ကြယ်တစ်လုံး စာအုပ်” ကို ဖတ်မိခဲ့ဘူးသိမှ စ၍- နဂါးလှည့် ဆိုသည်မှာ- နဂါးငွေ့တန်းကြီး၏ လှည့်သွားသော အရပ် မျက်နှာ အနေအထားကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်မည် ဟု ရိပ်စားမိခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီး အနေဖြင့်- မြန်မာတို့ ဆိုရိုးပြုသော နဂါးလှည့် နှင့် မီလ်ကီးဝေး ခေါ် နဂါးငွေ့တန်းကြီး ကို ဆက်စပ် ပြခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း- ဆရာကြီး- အနေဖြင့်- ဇန်န၀ါရီလတွင်- နဂါးငွေ့တန်းသည် အရှေ့တောင်ထောင့်မှ အနောက်မြောက် ထောင့်သို့ သွယ်တန်း နေသည်ဟု ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ထိုစဉ် ကျွန်တော် ၈-တန်း ကျောင်းသား အရွယ်ခန့်က- ကောင်းကင်တွင် သတိပြုမိသော နဂါးငွေ့တန်း ၏ လက်တွေ့ မြင်တွေ့ ရရာ အရပ်မျက်နှာ နှင့်- “… “နတ်၊ပြာ၊တွဲ- တောင် ” ဆိုသော နဂါးလှည့် ကဗျာ လေးကို ဆက်စပ်မိရာမှ ဆက်စပ်မိခြင်း ဖြစ်၍- သေချာသည် ဟူ၍တော့ မယူဆခဲ့ပါချေ။
နောက်ပိုင်း နှစ်ကာလများတွင်- သတိရ၍ ကောင်းကင်ကြည့်မိပြန်တော့လည်း- တိမ်ထူထပ်သော ကာလများ၊ မိုးရာသီ ကာလများ နှင့် ကြုံပြန်၍ လည်းကောင်း၊ နဂါးငွေ့တန်းသည် မိုးကုတ် စက်ဝိုင်း နှင့် ကပ်သွားသော ကာလများကြောင့်- အဆောက်အဦ များနှင့် ကာနေပြန် သဖြင့် မမြင်ရနိုင်သဖြင့် လည်းကောင်း ထိုဆက်စပ်မှု ဆိုလိုရင်းကို အခိုင်အမာ မသိခဲ့မိပဲ- မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် လိုလို ဖြစ်ခဲ့မိ၏။
ကြုံကြိုက်၍ - နက္ခတ်ဆရာများ၊ ဆရာကြီးများအား မေးမြန်းကြည့်မိသလောက်တွင်လည်း- ရေရေ ရာရာ အဖြေမရခဲ့သလို- စာအုပ် စာတမ်းများ တွင် ဆက်စပ် ရေးသားမှုများကို မဖတ်ခဲ့ရပါပေ။
နက္ခတ် ပညာရပ်များ နောက်ပိုင်း လေ့လာ ရာတွင်လည်း- အခြေအနေ ကို ပို၍ - ရှုပ်ထွေးသွားစေနိုင်သည့် အချက်ဖြစ်သော- အနောက်တိုင်း အနေဖြင့် ကင်းမြီးကောက်ပုံ ယူဆသော ဗြိစ္ဆာရာသီ ကြယ်စုကြီးကို မြန်မာတို့က- ကြယ်နဂါးဟု ခေါ်၍- အနုရာဓ သည် နဂါးခေါင်း၊ ဇေဋ္ဌ ကြယ်ကြီးသည် နဂါးချက် ဟု လည်းကောင်း၊ နဂါး နှလုံး ဟု လည်းကောင်း ထပ်ပြောပြီး- ထိုကြယ်စုကြီး သည် နဂါးလှည့် ဖြစ်သည်ဟုပင် ပြောဘူးသူ ပညာရှင် တို့ကိုလည်း ကြုံဘူး ခဲ့ပါ၏။ ကျွန်တော့် အနေဖြင့် ဗြိစ္ဆာရာသီ ကြယ်စုကြီးကို နဂါးလှည့် ရွေးရာတွင် ဆိုလိုသော နဂါး မဟုတ်နိုင်ကြောင်း၊ နဂါးလှည့် သည် နဂါးငွေ့တန်းကို ဆိုလိုကြောင်း လက်ခံ သိရှိထားမိ သော်လည်း- အထောက်အထား သေသေချာချာ ဆက်စပ် မပြနိုင်ခဲ့ပါချေ။
လွန်ခဲ့သော ၃-နှစ် ခန့်၊ သက္ကရာဇ် ၂၀၁၀- တွင် ယခု အောက်ပါ ပုံတွင် ဖေါ်ပြထားသည့် Planisphere ကို ကျွန်တော် ၀ယ်ယူခဲ့၏။
Planisphere ကို အသုံးပြုပုံကို ဤဆောင်းပါးတွင် ဖေါ်ပြပေးမည် မဟုတ်သေးသော်လည်း- ၄င်းတွင်- နဂါးငွေ့တန်း ကို ဖေါ်ပြထား၏။ ထိုအခါတွင်- မြန်မာ လ-များအရ- နဂါးငွေ့တန်း ကို လှည့်ကြည့်နိုင်ခြင်းဖြင့်- ရှေးလူကြီး သူမ တို့၏ နဂါးလှည့် ကို အတိအကျ မြင်တွေ့ရတော့၏။
စာဖတ်သူ အနေဖြင့်- ယခု ဖေဖေါ်ဝါရီ လ-လယ်ပိုင်းကာလ- ပိုင်း ညဥ့်သန်းခေါင် ခန့်တွင်- ကောင်းကင်အား ကြည့်လိုက်ပါက- တောင် ဘက်မှသည်- အနောက်မြောက်သို့ သွယ်တန်းနေသည့်- နဂါးငွေ့တန်းကြီးကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ဤပုံတို့မှာမူ Stellarium ပရိုဂရမ်ဖြင့် အသုံးပြု ဖေါ်ပြထားခြင်း ဖြစ်၏။ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော ၀ယ်ယူထားသည့် Planisphere ကို လှည့်၍- ဖေါ်ပြမည် ဆိုပါက- အချို့လများတွင်- နဂါးငွေ့တန်း ကို ကွယ်သွားသော အနေအထားကြောင့်- Stellarium မှ ပုံဖြင့် ဖေါ်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ဖေဖေါ်ဝါရီ လ၏ အနောက်မြောက်ဘက် ကောင်းကင်ပြင်ကို ကြည့်လိုက်ပါက- နဂါးငွေ့တန်း နှင့် တစ်ကွ၊ နက္ခတ်၊ ကြယ်စု များကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် အတိုင်း မြင်ကြရပါလိမ့်မည်။
နောက် ၂-လ အကြာ၊ ဧပြီလ လယ်ပိုင်းတွင်မူ နဂါးငွေ့တန်း အနေဖြင့်- မိုးကုတ် စက်ဝိုင်း နှင့် နီးစပ်စွာ အောက်ခြေတွင် ကပ်သော အနေအထားသို့ ရောက် နေသည်ကို- မိုးတိမ် ကင်းစင်ပါ၍- မြို့နှင့် ဝေးကွာသော ဒေသမှ သွားရောက် ကြည့်ရှုပါက- မြင်ရပါလိမ့်မည်။ မြို့နှင့် နီးလျှင်မူ- မြို့မှ လျှပ်စစ် အလင်းရောင် များကြောင့် Light Pollution ဖြစ်ကာ - မြင်နိုင်ရန် ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။
ဆက်လက် ဖေါ်ပြထားသော စက်ဝိုင်းပုံမှာ ဧပြီလ တွင် နဂါးငွေ့တန်း အနေအထားကို မြင်ကွင်း ခြုံ့ကြည့်လိုက်သော ပုံ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင် Planisphere
အနောက်နိုင်ငံသုံး Planisphere များတွင် အနောက် နိုင်ငံသုံး Contellation များ၊ Galaxy နှင့် ကြယ်များသာ ပါသဖြင့်- မြန်မာ နက္ခတ်၊ တာရာ အမည်များကို မိမိစိတ်ကြိုက် ထည့်နိုင်ရန်၊ လိုချင်သည်ကို မြင်ရပြီး၊ မလိုချင်သည် များကို ဖျောက်ထားနိုင်ရန်၊ AutoCAD ဖြင့် ကိုယ်ပိုင် Planisphere တည်ဆောက် ခဲ့ရပါတော့၏။
အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် အခမဲ့ ပေးထားသော- Planisphere များတို့ ရှိသော်လည်း- ရက်စွဲများတွင်- (ဥပမာ ၃၁-ရက်၊ ၂၈-ရက်) စသည် တို့ အတိအကျ မဟုတ်ပဲ- တစ်လလျှင် ရက် ၃၀ ဖြင့်- ပိုင်းဖြတ်ပေးထားသော အနေအထားများ ဖြစ်တတ်ကြသဖြင့် ကျွန်တော် သဘောမကျ။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်က- ကိုယ်ပိုင် ရက်စွဲက အစ- အသေအချာ ပိုင်းဖြတ်လုပ်ခဲ့ရ၏။ (ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၉-တော့ မထည့်နိုင်ပါချေ။) နက္ခတ် တာရာ အမည်များ နှင့် တကွ နဂါးငွေ့တန်းကိုပါ ထည့်ရေး၏။
ယခုဆောင်းပါးတွင်- နဂါးငွေ့တန်းကြီး လည်ပါတ်သွားပုံ- တစ်နည်းအားဖြင့် နဂါးလှည့်ကို ဖေါ်ပြနိုင်ရန် အတွက် အောက်ပါ အတိုင်း အရပ်မျက်နှာ နှင့် အချိန်နာရီ ဖေါ်ပြထားသည့် ဖရိမ် တစ်ခုကို ဆွဲလိုက်ပါ၏။ အရပ်မျက်နှာများ ဖေါ်ပြထားပုံ ထူးခြား နေခြင်းသည်- အီကွေတာ၏ မြောက်ဘက် တွင် ရှိသော မြန်မာ ပြည်အတွက် အဆင်ပြေစေရန် ဖြစ်၏။ (မြောက်လတ္တီတွဒ် ၂၀ ဒီဂရီ ခန့်အတွက် ရေးဆွဲထားသည်။) အီကွေတာ နှင့် တစ်တန်းမျှ ရှိသော စင်္ကာပူ အနေဖြင့် မူ အရှေ့ အနောက် အနေအထားသည် တစ်တန်းတည်း ဖြစ်၏။
ဆက်လက် ရှင်းပြထားသော ပုံများတွင်- ဖရိမ်ကို မူသေ ထားပြီး- ဖရိမ်ရှိ ညသန်းခေါင် အချိန် နှင့်- အလယ်၍ နက္ခတ်ပုံများပါသော Planisphere စက်ဝိုင်း မှ မိမိ သိလိုသော ရက်စွဲကို ကိုက်ညီအောင် ထားပြီး- နဂါးလှည့် အနေအထားကို လှည့်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်၏။ (စာသားများ ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေခြင်း သည်- ပြင်ပတွင် လက်တွေ့ သုံးစွဲသော အခါ မိမိ ကြည့်လိုသော အရပ်သို့ လူက မျက်နှာမူပြီး- Planisphere တွင် ထိုအရပ်မျက်နှာကို အောက်ဘက် ထားခြင်းဖြင့် ၄င်းမှ ဖေါ်ပြချက်များကို အတည့် ပြန်ဖတ်၍ ရအောင် လုပ်ထားရသောကြောင့် ဖြစ်၏။)
တ၊ တန်၊ က- နောက် ဆိုသည့် အတိုင်း- Mar, April, May လများတွင် (ယခုပုံသည် မတ်လ ကို ပြထားခြင်း ဖြစ်ပြီး- ဧပြီလ အထိ နာရီ လက်တံ ပြောင်းပြန် အတိုင်း လှည့်ကြည့်ပါသော် - နဂါးခေါင်းသည်- မတ်လတွင် အနောက်တောင် (အနောက်ဘက် နှင့် ပိုနီးသည်။) မှ- ဧပြီလတွင်- အနောက်၊ မေလ တွင် အနောက် နှင့် အနောက်မြောက် အကြား- သို့ လည်လာသည်ကို တွေ့ရပါမည်။
နယုန်၊ ၀ါဆို၊ ၀ါခေါင် ဟူသော- ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ် လများတွင်- နဂါးခေါင်းသည် အနောက်မြောက်၊ မြောက်နှင့်၊ အရှေ့ မြောက်သို့ လှည့်လာသည် ကို လည်းကောင်း-
တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်းမုန်း လများတွင် - နဂါးခေါင်း ခေါ် နဂါးငွေ့ တန်းကြီးသည်
အရှေ့မြောက်၊ အရှေ့ နှင့် အရှေ့တောင် သို့လည်းကောင်း (တော်၊ ကျွတ်၊ မုန်း- ရှေ့)
နတ္တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လများတွင်- နတ်၊ ပြာ၊ တွဲ တောင် ဆိုသည့် အတိုင်း- အရှေ့တောင်၊ တောင်၊ အနောက် တောင် အတိုင်း လှည့်လာသည်ကို လည်းကောင်း တွေ့ကြရပါမည်။
ရိုးရာ ယုံကြည်မှု တို့နှင့် ပတ်သက်၍-
နိုင်ငံတိုင်း လူမျိုးတိုင်းတွင် ရိုးရာ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများ ရှိခဲ့ကြပါသည်။
ထိုရိုးရာ ထုံးစံတို့သည်- ထိုနိုင်ငံ ထိုလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ကို ယခင် နှစ်ပေါင်း များစွာ ပြသခဲ့သလို၊ ယခုလည်း ပြသ နေလျှက် ရှိပါ၏။
ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှု အားနည်းသော နိုင်ငံများအား- ပြင်ပ နိုင်ငံကြီးများသည် စစ်အင်အား၊ လက်နက် အင်အား တို့ဖြင့် လွှမ်းမိုးပြီးနောက် ယဉ်ကျေးမှု အားနည်းသည့် ထိုနိုင်ငံအား-၄င်းတို့ နိုင်ငံ အဖြစ်သို့ လုပ်ပစ်လိုက်ခြင်းကို- အမေရိကန် မူရင်း ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်သော ရက်ဒ် အင်ဒီးယန်း မျိုးနွယ်စု များစွာများ၊ သြစတြေးလျ နှင့် နယူးဇီလန် ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် အဘိုးရီးဂျင်း ဒေသခံ လူမျိုးများ၏ အဖြစ်တို့ က သက်သေခံ ခဲ့၏။ အကယ်၍ စာရှုသူသည်- အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ လွန်ခဲ့သော သမိုင်းတို့ကို လေ့လာခဲ့မည် ဆိုပါက- ဒေသခံ အင်ဒီးယန်း လူမျိုးတို့ အနေဖြင့် ငွေရှိလျှင် သော်မှ- စားသောက်ဆိုင်၊ လဘက်ရည်တို့ ၀င်ခဲ့မည် ဆိုသော်- ခွေးမောင်း သကဲ့သို့ မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရကြောင်း စသည်တို့ကို သိနိုင်မည် ဖြစ်၏။
ယဉ်ကျေးမှု အထောက်အထား ထင်ရှားစွာ သက်သေ မပြနိုင်သော နိုင်ငံတို့အား- ထိုနိုင်ငံကြီးများက- ယဉ်ကျေးအောင် ပြုလုပ် ပေးသည် Civilization ဟူသော ဝေါဟာရဖြင့်- ထိုနိုင်ငံများအား သူတို့ပိုင် နိုင်ငံများ အဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းလိုက်တော့၏။ မူလ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား တို့မှာမူ- အိမ်ရှင် စစ်စစ် ဖြစ်ပါလျှက် မီးဖိုချောင် နှင့် အစေခံ တန်းလျားတို့ ရောက်သွားကာ- လုယက်သူက အိမ်ဦးခန်း တွင် နေရာရပြီး သခင်ဖြစ်သွားတော့၏။
ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှု အားကောင်းသော- သမိုင်း ပြယုဂ် အထင်ကရ ရှိခဲ့သော တိုင်းပြည် နိုင်ငံတို့ကို ကျူးကျော် ရာတွင်မူ ၄င်းတို့၏ အရုပ်ဆိုးမှု မှာ ထင်ရှား အကျည်းတန် သွား သောကြောင့် ကိုယ်ပိုင် အိမ် လုပ်ခွင့် မရပဲ- အချိန်တန်ယင် ပိုင်ရှင်ထံ ပြန်အပ်ရသော အနေအထားသို့ ရောက်သွား၏။
ဤသည်မှာ ယဉ်ကျေးမှု သည်- နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအား မည်သူက ပိုင်ရှင် အစစ် ဖြစ်သနည်း ကို ပြသနိုင်သော အဓိက အကြောင်း အချက် တစ်ခု ဖြစ်သည် ကို ဆိုလိုရင်း ဖြစ်၏။
မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ထီးနန်း အစဉ်အလာ အားလုံးတို့တွင်- မြန်မာ့ နက္ခတ်ပညာ အပါ အ၀င် မြန်မာ့ ရိုးရာ ရှေးဟောင်း ပညာရပ်များ သည် ထာဝရ ယှဉ်တွဲ နေခဲ့၏။ တစ်ဘက်သူတို့က မြန်မာ့တို့အား အရိုင်းအစိုင်း များဟု ပြောမရ နိုင် သာ- ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်း အထင်ကရ ရှိထားခဲ့၏။
မှန်သည် ဖြစ်စေ- မှားသည် ဖြစ်စေ၊ လက်ခံလိုသည် လက်မခံလိုသည် ဖြစ်စေ- မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု၏ အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်ခဲ့သော မြန်မာ့ ရှေးပညာ များသည် မြန်မာ တို့- ယခုအထိ- မြန်မာနိုင်ငံ အဖြစ် တည်နေခြင်း အချက်ပေါ်တွင် ကျေးဇူးရှိသည် ဆိုသည်ကို မည်သူ ငြင်းနိုင်အံ့နည်း။
ထိုကျေးဇူးတရားကို မြန်မာ့ စာပေ၊ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းတို့ကို လေ့လာသူ အချို့သာ သိနိုင်လျှက်- အများစု အနေဖြင့် ရုတ်တစ်ရက် မမြင်နိုင်ပါပေ။
သို့ဆိုလျှင်- မြန်မာ့ ရိုးရာ အယူအဆ များကို အဓိပ္ပါယ် မရှိ ဟု သတ်မှတ် စော်ကား နေသူတို့က တစ်မျိုး၊ ဘာသာရေး ၏ ရန်သူ အသွင် အရောင်ချယ် နှိပ်ကွပ် နေသူတို့က တစ်ဖုံ သေးသိမ် အောင် လုပ်နေကြခြင်းသည် သင့်တော်သော လုပ်ရပ် ဖြစ်မည် ဟု စာရှုသူ ထင်ပါသလား။
ရှေးရိုးရာ အဖြစ် လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့သော မြန်မာ့ ဗေဒင် ပညာသည်-
အခြားခြားသော ပညာများကဲ့သို့ ပညာပင် ဖြစ်၍- လိုင်းခွဲအမျိုးမျိုး၊ အယူအဆ အမျိုးမျိုး၊ နည်းမူ အမျိုးမျိုး ရှိ၏။
ကောင်းကင် နက္ခတ်ပညာသည်သာ ဗေဒင် ဖြစ်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း။
နက္ခတ္တဝေဒ ပညာသည်သာ ဗေဒင် ပညာဖြစ်သည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
မဟာဘုတ်သည် သာ ဗေဒင်ပညာ ဖြစ်သည်ဟူ ၍လည်ကောင်း၊
ရက်ရာဇာ၊ ပြဿဒါး ရွေးချယ်မှုသည် ဗေဒင် ပညာဖြစ်သည်ဟု ၍ လည်းကောင်း ယူမှတ်ကြသော်-
ကျွန်တော်တို့သည်- အစွယ်ကိုင်မိသော မျက်မမြင် ပုဏ္ဏား၊ ဆင်နားရွက် ကိုင်မိသော မျက်မမြင် ပုဏ္ဏား တို့သာ ဖြစ်နေကြမည် ဖြစ်ပြီး- ထိုထို တို့သည် ဗေဒင် ပညာဟူ၍ နားလည် ထားနိုင်သော အနေအထားမျှ ဖြင့်- ဗေဒင် ပညာအား နှိပ်ကွပ် နေကြခြင်းသည် သင့်တော်သော - ဝေဘန်မှု၊ အခြားသူများအား- ငြိမ်းချမ်းမှုကို ပေးသော သင်ကြားမှု ဖြစ်သည်ဟု၍ တော့ ကျွန်တော် မထင်မိပါချေ။
တစ်ဘက်လူ၏ ယုံကြည်မှု သည်- သူကိုယ်တိုင် နှင့် လူ့ပါတ်ဝန်းကျင်အား ဘေးဥပါဒ် မဖြစ် စေနိုင်သ၍ ထိုယဉ်ကျေးမှု အား အသိအမှတ် ပြု ထိမ်းသိမ်း သင့်ကြောင်းကို - ကျွန်တော့် အနေဖြင့်- “ယုံကြည်မှု၊ ကြောင်းကျိုးတရား နှင့် အစွန်းရောက်မှုများ” ဆောင်းပါးတွင် ရေးသားခဲ့ပါ၏။
ယုံကြည်မှုတို့တွင် မိမိ မသိနိုင်သော နောက်ခံ အကြောင်းရင်းများ ရိုနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ထိုဆောင်းပါးတွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပါ၏။
လူတိရစ္ဆာန် တို့၏ အသက်ဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း စသော အစွန်းရောက်သည့် ယုံကြည်မှုမျိုး မဟုတ်လျှင်- သရဏဂုံ ပျက်လောက်သည် အထိ အစွန်း မရောက်လျှင်-
ဗေဒင်ယုံ၍- ယတြာချေခြင်း၊ အချိန်အခါ ရွေးခြင်း၊ နဂါးလှည့် ရွေးခြင်း၊ ရက်ရာဇာ ဆောင်၊ ပြဿဒါး ရှောင်၊ သမားဖြူ၊သမားညို၊ ရက်ယုတ်မာ ရွေးခြင်းတို့သည်- မည်သူ့အားမျှ ဒုက္ခပေးသော၊ ကာယကံရှင်၏ ရွေးချယ်မှု သာ ဖြစ်၍-
ထိုသူ အနေဖြင့် ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အယူအဆ အရ ရရှိ နိုင်သော အပြစ် နှင့်- မိမိ အလုပ်ကို မိမိ ကောင်းစွာ မလုပ်သော၊ မိမိ ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ကို စောင့်ရှောက် ရမည့် အစား လောဘ ကြောင့် ဒုက္ခပေးသူ အဖြစ် ရောက်သွားကြသော- အကျင့်ပျက် အရာရှိများ၊ အကျင့်ပျက် ၀န်ထမ်းများ၊ ဂုဏ်သိက္ခာ မစောင့်စည်း သော-လူမှု လောက ၀န်ထမ်း အချို့ နှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များ ၏ အပြစ်တို့ မည်သည်က ပိုကြီး အံ့နည်း။
ဘာသာရေး လမ်းညွန် သင်ပြသူတို့သည် ဗေဒင် ယုံသူတို့ကို ၏ အမှားကို ထောက်ပြ သကဲ့သို့- ထိုသူတို့၏ အပြစ်ကိုရော ထောက်ပြ ဟောကြား ကြပါသည် လား။
မည်သည့် အပြစ်ကို ထောက်ပြ ကြသည်က ပိုများသနည်း။
ကျွန်တော့် အမြင် ကျွန်တော် သိသမျှ ဖြင့်- ရှေးလူကြီးတို့၏ နဂါးလှည့် သည် မည်သည်ကို ဆိုလိုကြောင်း တတ်နိုင်သရွေ့ တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကမ္ဘာ မှ မြင်ရသော နေထက် အဆများစွာ အင်အားကြီးသော နေမင်းကြီးပေါင်း ဘီလျံများစွာ ရှိသည့် - ဘလက်ဟိုးလ် ခေါ် စကြာဝဠာ ကျွင်းနက်ကြီးများ ရှိသည့် ထို နဂါးငွေ့ကြီး၏ အနေအထားကို နာဆာ NASA အနေဖြင့်- သိရှိထားပြီး ဖြစ်ရာ- ထိုစွမ်းအင် တို့ အကြောင်းကို တစ်စုံ တစ်ရာ သိခဲ့ကြသော- မြန်မာ ရှေးလူကြီးများက- နှောင်းလူ တို့အတွက် စေတနာဖြင့် ညွန်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါ၏။
“ဟဲ့ စလောင်းဖုံး ၂-ချပ် မတီးနဲ့- တီးယင် ကျားကိုက်တတ် တယ်” ဟု- စလောင်းဖုံးများ မကွဲရန် ရည်ရွယ်၍- ကျားကြောက် သည့် ကလေးကို တားမြစ် ခဲ့သော စကားကို - အပေါ်ယံ သဘောယူ၍- အဓိပ္ပါယ်မဲ့သည် ဟု ဆိုမည်လား။ လိုက်နာ ခြင်း ဖြင့် တော့ အကျိုး မယုတ် နိုင်ဟု ကျွန်တော် မြင်ပါ၏။
ဤဆောင်းပါးတွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော နဂါးလှည့် အကြောင်းသည်- ရှေးမြန်မာ လူကြီး သူမများက လက်ဆင့်ကမ်း လမ်းညွှန် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၍- မိမိ အနေဖြင့် လက်ခံ လိုလျှင် လက်ခံ၍ လက်မခံလိုလျှင် လည်း လက်မခံယုံသာ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍- နဂါးလှည့် ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့်- သင့်အနေဖြင့် အကျိုးပျက်စရာ များ ရှိနိုင်ဆိုလျှင်လည်း-
မလိုက်နာပဲ နေလိုက်ရုံ ပင် ဖြစ်၏။
သို့သော် အထင်သေး ပုတ်ခတ်ခြင်း မလုပ်သင့်သော အရာများ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် ထင်မိပါသည်။
ကျွန်တော့် အနေဖြင့် မှန်လျှင်လည်း မှန်ပါမည်။ မှားလျှင်လည်း မှားနေပါလိမ့်မည်။
အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်- ကျွန်တော်သည်- အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း ကျွန်တော့် အကြောင်းပင် ကျွန်တော် မသိသောကြောင့် ဖြစ်တော့၏။
Labels: နဂါးငွေ့တန်း၊ မီလ်ကီးဝေး၊ နဂါးလှည့်
သဘောကြ နှစ်သက် မိသော ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ပါဘဲ ခင်ဗျာ။
လေးစားပါတယ် ဆရာ။ ဘယ်နေ၇ာမှ မကြားမသိရတဲ့- အသိတွေကို ဒီဆိုက်ကနေ ရဲရဲရင့်ရင့် ဖေါ်ပြပေးတာရော။ မဟုတ်တာတွေ အဟုတ်ထင်ပြီး ဟုတ်တာတွေ မဟုတ်တာထင် နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို သိသင့်တာတွေ အသိပေးနေတာရော အတွက်ပါ- ယခင်က ရော၊ ယခုရော၊ နောင်မှာပါ ဒီလို အသိပေးတဲ့ နေရာမျိူးရှိဖို့တော့ မလွယ်လှပါ။ ဆရာ- ကျန်းမာစွာနဲ့ ဆက်လက် ဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါစေ။
ဆရာတော်ဦးသီလာစာရရဲ့ ပြက္ခဒိန်စာတမ်းမှာတော့ မသိနားမလည်ပဲ အပြစ်တင်ကြသူတွေကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့တာကို မှတ်သားဖူးပါတယ်ဆရာ . .
သိဒ္ဓါန္တသိရောမဏိကျမ်းကို ရေးသားစီရင်ခဲ့တဲ့ ဘာကရဆရာကတော့ အရမ်းတင်တဲ့ အပြစ်မျိုးကို အောင့်အီးမျိုသိပ်မထားဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မငဲ့မညှာ ချေပပြောဆိုတတ်တယ်။
ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ သိဒ္ဓါန္တသိရာမဏိကျမ်းအစ ၅-ခုမြောက် ဂါထာမှာ . .
တုဿန္တုသုဇနာဗုဒ္ဓါ၊ ၀ိသေသေ မယုဓိရတေ။
အဗောဓေန စသန္တောမံ၊ တောသမေဿန္တိဒုဇ္ဇနာ ။ ။
မယာ-ငါသည်၊ ဥဓိရိတေ-မိန့်ဆိုအပ်သော၊ ၀ိသေသေ- အထူးထူးအပြားပြားသော အနက်အဓိပ္ပါယ် အသွယ်သွယကို၊ ဗုဒ္ဓါ- အဟုတ်တကယ်သိကြကုန်သော၊ သုဇနာ- ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်၊ တုဿန္တု- နှစ်သိမ့် ကျေနပ်တော်မူကြပါစေသတည်း။ . . .
ဒုဇ္ဇနာ-သေးငယ်ဖျင်းသိမ် ဥာဏ်လိမ်ဥာဏ်ရွဲ့ ဥာဏ်နုံနဲ့ ငမိုက်သားတို့သည်ကား၊ အဗောဓေန- အဟုတ်အမှန်ကို ခြေငံစေ့ငုံ မသိမှုကြောင့်၊ မံ- ငါ့ကို၊ ဟသန္တော- ပြုံးစပ်စပ်မျက်နှာပေးနှင့် မေးငေါ့ကာ ရယ်သွမ်းကြကုန်လျက်၊ တောသံ- နှစ်သိမ့်ကျေနပ်ခြင်းသို့၊ ဧဿန္တိ- မုချမသွေ ရောက်ကြစေကုန်လတ္တံ့။ . . လို့ ပြောထားခဲ့တဲ့ စကားရှိပါတယ်။
အဲဒီ ဘာကရဆရာ ပြောထားခဲ့တဲ့စကားအတိုင်း မကျရလေအောင် နှလုံးသွင်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာဖြင့် မြန်မာပြက္ခဒိန်များကို စေ့စေ့စပ်စပ် အထပ်ထပ်လေ့လာပြီးမှ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ရှုတ်ချခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း ကိုပြုလုပ်ကြပါလို့ ဤစာတမ်း၏ အဆုံး၌ တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။ ဆိုပြီး လမ်းညွှန်သွားပါတယ်ဆရာ . .